Kudengenyeka Kwenyika muHaiti | Bhuku Regore ra2015
Kuwedzera Mundima yeChinese
Muna 2005, Tin Wa Ng, uyo aiva nhengo yeBheteri uye anotaura chiChinese, akagadzwa sapiyona chaiye nebazi reDominican Republic kuti aparidzire vanhu vakawanda vekuChina vaiva munyika yacho. Akaberekerwa muDominican Republic uye akakurira imomo. Vabereki vake vainge vatama vachibva kuChina vachiuya kuSanto Domingo.
Musi wa1 January 2008, ungano yemutauro weMandarin Chinese yakatangwa muSanto Domingo, uye muna 2011 pane boka rakatangwa muSantiago. Vaparidzi 70, vanosanganisira mapiyona enguva dzose 36 uye mapiyona ebetsero akati kuti, vanoitisa avhareji yezvidzidzo zveBhaibheri 76 mwedzi wega wega.
Kutsvaka Vadzidzi Vanotaura Chirungu
Pakazosvika 2007, mainge mava nevaparidzi 27 466 muungano 376, uye zvidzidzo zveBhaibheri zvaiitiswa zvaiva 49 795. Kunyange zvazvo paiva nevanhu vakati wandei vaitaura Chirungu, pakanga pasina ungano yemutauro wacho. Naizvozvo muna April 2008, bazi rakatumira mamishinari maviri, Donald naJayne Elwell, kuSanto Domingo kuti vanotanga boka remutauro weChirungu. Boka duku revaparidzi vaiva nechido rakatanga ratsvaga kwaigara vanhu vaitaura Chirungu. Vakazoronga ndima yacho kuti inyatsoparidzirwa.
Zvese izvi zvakaita kuti boka remutauro weChirungu raiva muSanto Domingo rirambe richikura, uye ungano yevaparidzi 39 yakaumbwa muna July 2009. Ndizvo zvakaitwawo mune dzimwe nzvimbo munyika yacho. Pakazosvika November 2011, munyika yacho makanga mava neungano nomwe dzeChirungu neboka rimwe chete.
Mukadzi Matsi Uye Bofu Anotsigira Jehovha
Piyona chaiye achikurukura naLorys nemasaini anoshandisirwa vanhu vasingaoni uye kunzwa
Lorys akakura ari nherera. Ane chirwere chakaita kuti aberekwe ari matsi uye chakaita kuti zvishoma nezvishoma atange kusanyatsoona paakanga ava nemakore 16. Anokwanisa kuona zvishoma kana ari masikati asi husiku haatombooni zvachose. Kana kwadoka anokwanisa chete kukurukura nemasaini anoshandisirwa vanhu vasingaoni uye kunzwa.
Mumwe murume nemudzimai vaiva mapiyona chaiwo vakasangana naLorys paaiva nemakore 23. Panguva iyoyo ainge achigara nemurume aiva matsi pamwe chete nemwanasikana wavo aiva negore anonzwa uye anotaura. Lorys akabvuma kuenda kumusangano weungano uye akabaiwa mwoyo nezvaakadzidza.
Lorys akakurumidza kuchinja upenyu hwake. Somuenzaniso, paakadzidza kuti kugara kwaaiita nemurume vasina kuchata hakuna kunaka, akakurukura naye nezvekukosha kwekuva nemuchato uye akatsanangura kuti aida kutevedzera zvose zvinotaurwa neBhaibheri. Murume wacho akashamiswa nematauriro akaita Lorys achibuda pachena, ndokubvuma kuchata naye.
Pashure pekunge vachata, Lorys akava muparidzi uye munguva pfupi akazobhabhatidzwa. Panguva iyi akadzidza Mutauro Wemasaini wokuAmerica paaidzidza neZvapupu. Kubva ipapo ari kubatsira mwanasikana wake kudzidza mutauro wacho, uye ari kumudzidzisa chokwadi.
MuHaiti Munoitika Kudengenyeka Kwenyika Kwakakura
Vagari vemuDominican Republic neHaiti vachaita nguva refu vachiyeuka musi weChipiri, 12 January 2010. Ndiwo musi wakaitika kudengenyeka kwenyika kwakaipisisa muHaiti. Dare Rinodzora reZvapupu zvaJehovha rakabvumira bazi reDominican Republic kuti ritumire mari yekuyamura kubazi reHaiti. Sezvo mari yaida kuendeswa yainge yakati wandei, chiremba wepaBheteri Evan Batista, akareba 1,9m, achirema 127kg, ndiye akabatiswa mari yacho.
Chisarudzo chekutumira Hama Batista chakaitwa panguva yakakodzera nekuti hama yacho payakanga yava pabhodha, yakaudzwa kuti vanhu vane ruzivo rwekurapa vaidiwa chaizvo muHaiti. Vanhu vainge vanyanya kukuvara pakudengenyeka kwacho vaiunzwa kuImba yeMagungano yakabatana nebazi remuHaiti kuti varapwe. Hama dzemuHaiti padzakaziva kuti Hama Batista vakanga vari chiremba wepabazi, dzakafonera bazi rekuDominican Republic dzichikumbira kuti Hama Batista varambe vari muHaiti. Bazi rekuDominican Republic rakabvuma uye izvozvo zvakaita kuti hama dzedu dzemuHaiti dzitange kubatsirwa pashure penguva pfupi kudengenyeka kwenyika kwaitika.
Hama dzakaita chipatapata kuti dzibatsire pashure pekudengenyeka kwenyika muHaiti muna 2010
Dhipatimendi Rinoona Nezvekutengwa Kwezvinhu repabazi remuDominican Republic rakabva rataura nevaigara vachiritengesera zvekudya. Saka pakatengwa zvinhu zvinopfuura 6 800kg zvakadai semupunga, bhinzi uye zvimwe zvinhu zvekudya zvikatumirwa kuHaiti nenguva dza2:30 mangwanani musi weChina, 14 January. Izvi zvakanga zviri zvinhu zvekuyamura zvakatanga kusvika zvichibva kunze kwenyika. Zuva iroro vamwe vanachiremba vatatu vanobva kuDominican Republic vakasvika kubazi reHaiti pashure pekunge vaita maawa manomwe vari parwendo. Ainge atova manheru pavakasvika, asi pane kuti vaende kwavaizogara, vakaenda kwaiva nevainge vakuvara uye vakashanda kutozosvika pakati peusiku. Zuva rakatevera pakanga patova nevamwe vanachiremba vana uye manesi mana vainge vasvika vachibva kuDominican Republic. Kuopareta vanhu vakanga vakuvara kwakanga kwakaoma sezvo kwaiitirwa paImba yeMagungano. Kwemazuva manomwe akatevera vose vari 12 vakarapa vanhu 300 vakanga vakuvara.
Zuva nezuva vainge vakuvara zvakaipisisa vaiendeswa kuDominican Republic kunorapwa. Dzimwe nguva motokari dzaiuya nezvinhu zvekuyamura kuHaiti ndidzo dzaizoenda nevanhu vakanga vakuvara kuzvipatara zvakasiyana-siyana zvemuDominican Republic. Bazi rakaronga Mapoka Anoshanyira Varwere kuitira kuti akurudzire vakanga vakuvara uye kuti ave nechokwadi chekuti vawana mishonga nezvimwe zvavaida. Vaya vaiuya nehama dzavo dzainge dzakuvara vaipiwa zvekudya nepekugara neungano dzemuDominican Republic
Zvapupu zvaJehovha zvakapa vanhu zvinhu zvinopfuura 453 600kg kusanganisira zvekudya zvakabikwa zvinokwana vanhu 400 000
Zvakaitwa nevanhu vaJehovha pashure penjodzi iyi ndizvo zvinotaurwa nemashoko anokurudzira ari pana Zvirevo 17:17 anoti: “Shamwari yechokwadi ine rudo nguva dzose, uye ihama inoberekerwa kubatsira pakunenge kuine kutambudzika.” Zvinogara zvichiitika zvinoratidza kuti Jehovha ari kushandisa mudzimu wake nesangano rehama dzechiKristu kuti atsigire vakavimbika vake kunyange pavanotarisana nerufu. Basa rakakura rekuyamura rakaitwa kwemwedzi yakati wandei. Zvapupu zvaJehovha zvakapa vanhu zvinhu zvinopfuura 453 600kg kusanganisira zvekudya zvakabikwa zvinokwana vanhu 400 000. Hama nehanzvadzi 78 dzine ruzivo rwekurapa dzinobva kunyika dzakasiyana-siyana dzakashandisa nguva neruzivo rwadzo dzisingabhadharwi dzichishanda pamwe chete nevamwe vakawanda vakazvipira. *
^ ndima 1 Kuti muone mamwe mashoko onai Mukai! yeChirungu yaDecember 2010 mapeji 14-19.